कोरोनाविरुद्धको तयारी बुझ्न वाग्मतीका स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा स्थलगत भ्रमण- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
माघ २, २०७८ नगेन्द्र अधिकारी
काभ्रे — कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भइरहेको तयारी बुझ्न वाग्मती प्रदेशका स्वास्थमन्त्री निमा लामा आइतबार धुलिखेलस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोशगाला र स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे पुगेका छन्।
‘पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि मातहतका सबै स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छौं,’ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भेटिएका मन्त्री लामाले भने, ‘तयारी अवस्थामा रहेको कागजी बिफ्रिङ त लिएँ तर स्थलगत नै बुझौं भनेर आएको हुँ ।’
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनले परीक्षणको संख्या र संक्रमण दरबारे चासो लिएका थिए । परीक्षणका क्रममा हुने समस्याबारे जानकारी लिँदै उनले कुनै पनि सहयोग गर्न आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक डा. नारायण कार्कीले जिल्ला जिल्लामा परीक्षण सुरु भएको भन्दै चाप केही कम भएको बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. पुरुषोतम सेढाईले उनलाई जिल्लामा संक्रमणको अवस्था, खोपको उपलव्धता, आइसोलेसन र अन्य तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले तीन प्रमुख नाकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको जानकारी गराएका थिए । १८ वर्षमाथिका ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोपको पहुँच पुगेको भन्दै उनले बाँकीलाई पनि खोप दिन अभियान चलाएको बताए ।
मन्त्री लामाले कोरोना नियन्त्रणको लागि खोप नै प्रभावकारी माध्यम भएको भन्दै प्रदेशमा ७४ प्रतिशतले खोप पाइसकेको र बाँकीलाई समुदायमै गएर खोप लगाउने गरी तयारीसमेत भएको बताए ।
यस्तै १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको लागि ७ जिल्लामा मोडर्ना र ६ जिल्लामा फाइजर खोप स्कुल–स्कुलमा गएर लगाउने अभियान तीव्र पारिएको पनि उनले बताए । महामारीमा नागरिक बचाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै उनले अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई पहिलो चरणमा र त्यसपछि दीर्घरोगी, जेष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ २०:४९
राजधानीमा जनकपुर सबै दलको साझा प्रस्ताव रहे पनि बारा–पर्साका सबै दलका सांसदहरुले वीरगन्ज छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेका छन्
माघ २, २०७८ सन्तोष सिंह
धनुषा — नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले प्रदेशको नाम ४ वटा र राजधानीको नाममा ३ वटा पेस गरेपछि प्रदेशको नाम र राजधानी फेरि मतदान प्रक्रियामै गएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा दलका सांसदहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याएपछि नाम र राजधानी टुंग्याउन मतदान हुने भएको हो ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सांसदहरू बोल्ने क्रम नसकिएकाले सोमबार ११ बजे फेरि संसद् बैठक डाकिएको छ । सोमबार सांसदको बोल्ने क्रम सकिएपछि नाम र राजधानीको छिनोफानो गर्न मतदानको समय तोकिने प्रदेशसभा संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा समितिका तर्फबाट सांसद प्रमेश्वर साहले प्रतिवेदन पेस गर्दै ‘जतिसुकै प्रयास गरे पनि नाम र राजधानीमा एकमत हुन नसकिएको’ बताए । उनले नाम र राजधानी मतदान प्रक्रियाबाटै छिनोफानो हुने दाबी गरे । लगत्तै बसेको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले नाम र राजधानीबारे आ–आफ्ना अडान राखेका थिए ।
सभामुख नेतृत्वको संसदीय समितिले प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेस तथा राजधानी जनकपुरसहित उत्तरपूर्वमा ढल्केवर–कमला हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्म, वीरगन्ज महानगरपालिका र वीरगन्ज, सिमरा जितपुर, निजगढ हुँदै सिम्रौनगढसम्मको भूगोल समेटिएको छ । प्रदेशको नाम मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी (केन्द्र) को साझा प्रस्ताव हो । जानकी नाममा भने एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा मिथिला–भोजपुरा कांग्रेसको प्रस्ताव हो । यी सबै दलका बारा–पर्साका सांसदले भने प्रदेशको नाम मध्य मधेस भनेर छुट्टै प्रस्ताव गरेका छन् । राजधानीमा जनकपुर सबै दलको साझा प्रस्ताव रहे पनि बारा–पर्साका सबै दलका सांसदहरुले वीरगन्ज छुट्टै प्रस्ताव हालेका छन् ।
प्रदेश २ मा हाल जसपा, कांग्रेस, माओवादी (केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संयुक्त सरकार छ । प्रदेशसभाका १ सय ७ सांसदमध्ये माओवादीले ४ सांसदलाई कारबाही गरेपछि हाल १ सय ४ सांसद छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन दुई तिहाइ मत अनिवार्य छ । प्रदेश २ का सत्ता गठबन्धनले नै नाम र राजधानीको नाम फरक–फरक प्रस्ताव गरेपछि यो मामिला मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याइने भएको छ । करिब डेढ वर्षअघि, प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम मधेस, जानकी र मिथिला–भोजपुरा तथा राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा दुवै प्रस्तावलाई दुई तिहाइ नपुग्दा अस्वीकृत भएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रदेश सांसदबीच घोचपेच भएको छ । पर्सा, बारा र रौतहटका सांसदहरु जनकपुर महँगो सहर भएको र यहाँका स्थानीयले गर्ने व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जानकी भूमि जनकपुरप्रति उच्च सम्मान भए पनि जनकपुर राजधानी योग्य नभएको लोकतान्त्रिक सामाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रदेश सांसद प्रह्लाद गोस्वामीले बताए । ‘महँगो घर भाडाले जनकपुर बस्न सास्ती छ । पछिल्लो चार वर्षको भोगाइले जनकपुर राजधानी भए पछुतो हुन्छ,’ उनले भने, ‘२ रुपैयामा हाजमोला खरिद गरेको ४ दिनपछि ५ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको छ ।’
प्रदेश सांसद सिंहासन साह कलवारले पटकपटकको आन्दोलनले वीरगन्जमा भएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिलाई सम्मान गर्न वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने तर्क गरे । जसपाकी सांसद करिमा बेगमले जनकपुरवासीको व्यवहार राजधानीलायक नभएको बताइन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रवीन्द्र बैठाले जनकपुर राजधानी हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहले भौतिक संरचना र प्रदेशको ८ जिल्लालाई सहज आवतजावतका लागि जनकपुर राजधानी उपयुक्त रहेको बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद जयनुल राइनले राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा ५ दल रहेकाले जनकपुरधामको पक्षमा मत दिन अनुरोध गरे ।
प्रदेशसभामा नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । समितिले माघ पहिलो साता गोप्य मतदानमा जान प्रदेशसभालाई अनुरोधसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले गोप्य मतदान प्रक्रियाका लागि आवश्यक निर्वाचन कार्यविधि, जनशक्ति, स्रोत साधन, मतदान सामग्री र सुरक्षाको प्रबन्धलगायतका व्यवस्थापन मिलाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
राजधानी बनाउन दबाब
प्रदेशसभामा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको प्रदेशको नामका लागि जनकपुर र वीरगन्जवासीले दबाब बढाएको छ । प्रदेशसभामा जनकपुर र वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन दुई प्रस्ताव पेस गरिएको छ । सबै दलले जनकपुरलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरे पनि ती सबै दलका बारा–पर्साका सांसदहरुले भने वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन अर्को प्रस्ताव पनि पेस गरेको छ ।
जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन माग गर्दै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सभामुख सरोज यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठको नेतृत्वमा उद्योगी–व्यवसायी सम्मिलित टिमले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर नै उपयुक्त रहेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन पनि त्यहाँ दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेको छ । आइतबार बिहान गृहनगर वीरगन्जमै रहेका मुख्यमन्त्री राउतको निजी निवास अगाडि वीरगन्जवासीले राजधानी वीरगन्ज बनाउन दबाब दिए । राउतको घरअगाडि भेला भएका वीरगन्जवासीले ‘मुख्यमन्त्रीसँग राजधानी साट्न नपाइने’ भन्दै नाराबाजी गरे । अहिले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर हो ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ २०:४४